Dzvinyirira Mapeji muWordPress kuti Anoda Kupinda | Martech Zone
Vhiki rino, isu tanga tichipedzisa kuita yetsika theme pane yevatengi saiti uye ivo vakakumbira kuti isu tivake imwe mhando yekudyidzana uko mamwe emapeji anga arambidzwa kune vakanyoreswa vanyori. Pakutanga, isu takafunga nezvekushandisa chechitatu bato plugins, asi mhinduro yacho yanga iri nyore chaizvo.
Kutanga, isu takateedzera iyo template template kune nyowani faira (chero zita rakanaka, ingo chengetedza iyo php yekuwedzera). Pamusoro peji, ita shuwa kuti utaure pane peji kuti iwe ugone kuzviona mune template mupepeti nemazita:
Tevere, tsvaga mutsetse mune yako peji kodhi iyo inoratidza izvo zvirimo. Inofanira kutaridzika seichi:
Zvino, iwe unozoda kuputira imwe kodhi kutenderedza tambo iyoyo:
Subscriber Chete Tine urombo, zvemukati zvauri kuedza kusvika zvinongotenderwa kune vanonyoresa chete.
Iyo kodhi inotanga nekutarisa chikamu kuti uone kana mushandisi akapinda mune yako WordPress saiti. Kana ivo vakapinda mukati, izvo zvirimo zvinoratidzwa. Kana vasina kuvharwa mukati, meseji yacho inotaura kuti uri kuyedza kuwana zvirimo zvakarambidzwa.
Kuti ushandise peji racho, uchafanira kusarudza iyo Vanyoreri Chete peji template muchikamu chemberi chesarudzo dze peji rako (padivi rerutivi). Izvo zvinodzora iyo peji kune vaverengi vakapinda mukati.
Kana iwe uchida kuve wakasarudzika chaizvo, iwe unogona kuwedzera iyo yekupinda uye nzira yekubuda kunze kune yako sidebar zvakare:
">Kubuda /wp-login.php">Mutengi Kupinda
Tags: mutaririmunyorimupepetiLogged mulogged_inrinotengeswa nevaridziizvo_zvazviriWordPress
Kwakanakisa post ... Ndiri kushamisika izvi hazviwanikwe mune iyo Visibility sarudzo.
Sep 29, 2009 na12: 45 PM
Ndiyo mhinduro yakajeka, Doug! Muenzaniso wakanaka wekutsvaga iri nyore, asi inoshanda, mhinduro.
Sep 29, 2009 na1: 33 PM
Inobatsira post, iyi. Akatumira peji ino. Ndine mubvunzo zvakadaro.
Ko kana iwe uchida kuratidza chikamu cheblog-peji kune vese vashanyi, asi iyo yese kune chete vanyoreri?
Sep 29, 2009 na1: 50 PM
Izvo zvingave zvakapusa - iwe unogona kuwedzera iwo maitiro akafanana kune iyo musoro wepeji uye zvinyatso taura… if (no userid AND peji isina kuenzana ne pagename) wobva watungamira kumberi kune iyo rekupinda peji.
Jul 16, 2010 na4: 24 PM
mhinduro yakanaka kwazvo! izvo zvandaida, ndanga ndichifunga zvakanyanya kuvaka yekunze login sistem.
Izvi hazvishandisike zvine hushamwari kune vanhu vari kudzidza. Haishandisi mushe zvachose !!!!
Gumiguru 30, 2011 pa 12:04 AM
Zvirokwazvo hauna kunyora izvi mupfungwa kune newby. Ndine urombo Devs_mum!
Ndira 16, 2012 na10: 14 PM
Haisi mushandisi inoshamwaridzika asi zvakanaka ... ndinonzwa kunge mimwe mifananidzo yezvandiri kufanirwa kunge ndichiita ingabatsira. Zvikasadaro… Ndiri kuzongoedza zvinhu kusvika zvashanda!
Gumiguru 11, 2013 pa 1:40 AM
kopi peji.php, Rename peji2.php uye isa kodhi pamusoro, chengeta faira, dzosera kumashure kune zvemukati / theme / chero chakadanwa, enda kuposita kana peji shandura default peji dhizaini kune peji2.php. Hapana chikonzero chekugadzira peji nyowani dhizaini / dhizaini ingoteedzera iyo yaunoshandisa woitumidza zita. saka kuzara.php izere full2.php iri nyore.
Ndira 16, 2012 na11: 57 PM
Ok saka mushure mekuyedza KWAKAWANDA uye kutarisa mamwe maitirwo painternet… ndaona kuti KUGADZIRA peji nyowani template inyaya yangu. Ini ndinogadzira imwe muchinyorwa chinyorwa uye ndoedza kuiisa ku… kupi? Ini handitozive kwekuenda. Ini handigone kunge ndichiwana ino nzvimbo yakavanda yekuisa kune!
Saka ichokwadi, LaRocque! Iwe unofanirwa kuve neiyo FTP chirongwa uye kuwana kune yako webhusaiti theme dhata kuti iwe ugone kurodha faira ipapo. Iko HAPANA nzira pari zvino yekuzviita kuburikidza neyekutungamira skrini Imwe yakasarudzika ndeyekuisa iyo "File Manager" plugin iyo inobvumidza iwe kuti uite mafaera matsva. Chenjera, zvakadaro!
Aug 3, 2011 na1: 14 PM
Kana ingoshandisa - hapana chikonzero chekutakudza chinhu chese mushandisi.
Gumiguru 30, 2011 pa 12:03 AM
Unogona kunyatso tarisa kuti mushandisi akapinda mukati kana kwete; zvisinei, nzira yakatsanangurwa pamusoro apa inozokutendera iwe kushandisa mareti emvumo kana iwe uchida kugadzirisa mazinga!
Zvakanaka, saka ndicharuma… Ungaita sei izvi kuti ubvumire kutarisa mvumo?
Ngatitii - isu tichiri kuda kubvumidza chero munhu kuti agadzire rake rake "Anonyorera" zita rekushandisa, uye kutumira mhinduro.
ASI - isu tinongopa mukana kune iyo "Vanyoreri chete" peji chete kune avo vashandisi vanotsanangurwa nemukuru?
Kutenda kwazvo !
Douglas - Ini ndaishandisa kodhi yako - uye kune chikamu chikuru inoshanda kwazvo! Nyaya yandinayo ndeyekuti iyo Logout chinongedzo inodzokera kune saiti isipo. Ini ndanyatso kuyedza akawanda wordpress kodhi kubva kwakatenderedza webhu kuti iite iyo log yekubuda kodhi inoshanda. . . asi mushandisi achiri kugara akapinda mukati uye kudzoka kuri //wp-login.php?redirect_to=sho>log%20in%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX% XNUMX%
Zvinoita sekunge zvinogona kungoitika kuti kana kodhi yacho ikateedzerwa kubva kubhurawuza rako, yakawedzera boka renzvimbo dzeHTML, Ryan. Kopa kodhi kuNepepad kana Textpad uye wozoikopa mutemplate yako kuti ubvise izvo zvinhu.
Ok saka izvi ndizvo chaizvo zvandinofanira kuita asi ndine mubvunzo mumwe chete. Kana ivo vasina kunyorera, ndingaite sei kuti "sign in" kana "subscribe" bhokisi rioneke kuti vagone kuwana zvirimo?
Iwe unogona kuisa chinongedzo mushure mechimwe chirevo uko isu tine "Tine urombo…" kumusoro pamusoro.
Gumiguru 11, 2013 pa 1:44 AM
Kutenda nekodhi. ichaita kuti vanhu vanditsamwire, asi ivo vanofungidzira kuti vapinde mukati kana vachida chimwe chinhu kusabvumidza munhu wese kuwana mahara ekuita kuti mafaira ave nyore kuwana.
Ndira 31, 2014 na11: 43 PM
Zvinonzwika senge nzira iyi iri pasi pekubiwa kwechikamu. Iyo yekuki kuki ichawedzerwa uchiri munzvimbo yakachengeteka asi sezvo wordpress inoshanda ichi seye isina kuchengeteka cookie, icharamba ichishandiswa kana mushandisi akatsvaga achidzokera kuchikamu chesaiti chisina kunyorwa.
Uku hakusi kubira, inoshandisa iyo WordPress API mabasa - uye haipfuure chero chengetedzo kana kuwana chikamu kana kuki zvakananga.
ndatenda zvakanyanya kushandisa iyo chirevo kuita div mudziyo kana mushandisi iri nhengo
mhinduro yako yanga yakanaka